ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ သဘောတူစာချုပ် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကျင်းပ - Yangon Media Group
မော်လမြိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၂ဝ
မွန် ပြည်နယ် ကလေးသူငယ်အခွင့်အ ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှဦးဆောင် ၍ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂညီလာခံ သဘောတူစာချုပ်နှစ်ပတ်လည် နေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၂ဝ ရက် နံနက် ၉ နာရီ အချိန်တွင် မော်လမြိုင်မြို့၊ ဖက် တန်းရပ်ရှိ ပြည်နယ်ခန်းမ၌ကျင်း ပကြောင်း သိရသည်။
အခမ်းအနားတွင် မွန်ပြည် နယ်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ် ပအို့ဝ် တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဒေါ်စံဝင့်ခိုင်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး၊ မူကြိုကျောင်းများ နှင့် ကလေးပြုစုရေးဌာနများမှ ကလေးငယ်များက တေးသရုပ် ဖော်အဆိုအကများ၊ ပြဇာတ်များ ဖြင့် တင်ဆက်ကပြဖျော်ဖြေကြသည်။
ကလေးသူငယ်ဥပဒေအရ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့် ကလေးများကို မော်လမြိုင်ကလေး ပြုစုရေးဌာနတွင် ၄၃ ဦး၊ မော်လ မြိုင်လူငယ်သင်တန်းကျောင်းတွင် ကလေးနှင့် လူငယ် ၁၃၅ ဦး၊ မွန် ပြည်နယ်အတွင်း ပရဟိတဂေဟာ ငါးခုတွင် ကလေးနှင့် လူငယ် ၁ဝ၈၆ ဦး၊ အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက် ရေးရိပ်သာတွင် ၁၆ ဦး စုစုပေါင်း ၁၂၈ဝ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ထားပြီး အတန်းပညာသင်ကြား ပေးခြင်း၊ မိသားစုနှင့် ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေးများ ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိကြောင်း မွန်ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
မြန်မာ - ထိုင်းမြို့နယ် အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီ (မဲဆောက်-မြဝတီ) အစည်းအဝေး မြဝတီမြို့ ၌ ကျင်းပ
မြိုင်ကြီးငူမှ စစ်ဘေးရှောင်အချို့ တောတွင်း၌ သုံးနှစ်အတွင်း ဆယ်ဦးခန့် မြေမြှုပ်မိုင်းနင်?
သမ္ဘရာတိုင်း ချောင်းရိုးအင်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဟင်္သာတမြို့တွင် ရေလုပ်သား ၁ဝဝ ကျော် ဆန္ဒထုတ??